MS PowerToys: Mepee Isi Ikike nke Windows 10 Ndị Ọrụ | Site na Linux
Kemgbe afọ gara aga, Microsoft emeela ka ndị ọzọ nwee mmasị, ndị free ngwá ọrụ mkpọ na oghe emeghe akpọ Chika Okpala Ngwaọrụ ndị ahaziri maka ndị ọrụ kachasị elu nke ahụ Usoro njikwa, ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere iji rụọ ọrụ dị mma nke anaghị etinye ya na ndabara na ya.
Maka ọnwa nke Eprel 2020, ngwa a ka emelitere ugboro 2 ugbua. Oge mbụ 27 ụbọchị gara aga maka 0.16.0 mbipute, na ụbọchị nke abụọ 21 gara aga, maka ugbu a mbipute 0.16.1.
Dị ka gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub, kwuru na ngwa a kọwara dị ka:
"A set nke utilities maka elu ọrụ to ezi-akụ na streamline ha Windows ahụmahụ nke ukwuu arụpụtaghị. Mmụọ nsọ sitere na oru PowerToys nke oge Windows 95, ihe a na-enye ndị ọrụ ike ụzọ iji wepụ arụmọrụ karịa nke Windows 10 ma hazie ya maka arụmọrụ ọ bụla.".
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ndị ọrụ a anabatala ọrụ a Microsoft Open Source Code nke Omume (Microsoft Open Source Code nke Omume). Kedu ihe kpatara ngwa ngwa a ji abanye na ọtụtụ ndị ọzọ ewepụtara n'okpuru atụmatụ a iji mepụta ma gbasaa ojiji nke emeghe ngwa n'ime na n'èzí kwuru Usoro njikwa.
1 MS PowerToys - Ngwaọrụ mepere emepe n'efu
1.1.1 Xdị 0.16.0
1.1.2 Xdị 0.16.1
1.1.3 Ngwaọrụ gụnyere
MS PowerToys - Ngwaọrụ mepere emepe n'efu
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ndị edepụtara na ụdị a bụ ndị a:
FancyZone ndozi: Mmeli mma na Multi-Monitor mmejuputa iwu na na a dị mfe UX.
Ihe eji arụ ọrụ ọhụrụ: Otu n'ime ha bụ Markdown Preview, SVG Preview, Image Resizer na Windows Walker.
Ndozi ọhụrụ: Nke ahụ gụnyere idozi ihe karịrị nsogbu 100.
Ọtụtụ ndozi gosipụtara: Site ule e mere.
Ihe eji arụ ọrụ arụ ọrụ ọhụrụ.
Edozi ahụhụ ebe.
RDP ahụhụ na FancyZones ofu.
Mgbakwunye Telemetry na Windo Windo iji kwalite ọnọdụ ọrụ.
FancyZones: Window manager e mere iji mee ka odi mfe imeputa windo windo di omimi ma mee ngwa ngwa windo.
Ntuziaka ụzọ mkpirisi Windows: Cutzọ mkpirisi ụzọ na-egosi mgbe onye ọrụ jidere igodo Windows maka ihe karịrị 1 sekọnd ma gosi ụzọ mkpirisi dị na ihuenyo ahụ.
PowerRename: Windows Shell ndọtị, nke na-enye ohere ọchụchọ dị mfe na ngbanwe dị elu ma ọ bụ nha nha nke okwu oge na-eme ka ọchụchọ ọchụchọ dị mfe.
Njikwa ihe nchọgharị faịlụ: Nke na-enye ohere ịhụchalụ faịlụ ọhụrụ akpọrọ: Markdown (.md) na SVG (.svg)
Resizer foto: Shell ndọtị na-enye ohere ịgbanwe ngwa ngwa nha nke onyogho ahụ, na-enye ntinye aka nri dị mfe na File Explorer na-enye ohere ịgbanwe nha nke ihe kariri otu onyonyo ozugbo.
Walker Window: Ngwa na-enye gị ohere ịchọ ma gbanwee n'etiti windo mepere emepe, niile site na keyboard. Iji akụ na-agagharị n'etiti nyocha, na-ejide Alt + Tab.
Maka ozi ndị ọzọ banyere ụdị nke ugbu a na ọdịnihu mmepe mmepe ị nwere ike nweta ihe ndị a ozugbo njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere free ngwá ọrụ mkpọ y emeghe «MS PowerToys», chere maka ndị ọrụ kachasị elu nke sistemụ arụmọrụ a, ebe ọ na-enye ohere iji rụọ ọrụ dị mma anaghị etinye na ndabara na ya; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MS PowerToys: Mepee Isi Ikike maka Windows 10 Ndị Ọrụ